IS ခေါင်းဆောင်၏ ဗီဒီယိုဖိုင် ငါးနှစ်အတွင်း ပထမဆုံး ထွက်လာ - Yangon Media Group
IS ခေါင်းဆောင်၏ ဗီဒီယိုဖိုင် ငါးနှစ်အတွင်း ပထမဆုံး ထွက်လာ
ဘေရွတ်၊ ဧပြီ ၃ဝ
အစ္စလာမ္မစ်အုပ်စု IS တို့၏ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်နေသော ခေါင်းဆောင်၏ပုံရိပ်မှာ ငါးနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြောင်း။ IS အစွန်းရောက် အဖွဲ့လှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့ခွဲက ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း AP သတင်းဌာနက ဧပြီ ၃ဝ ရက်တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။
IS တို့အား ဆီးရီးယားနှင့် အီရတ်တွင် အပြီးသတ်အနိုင်ရရှိ ခဲ့ပြီးဟု အားလုံးသိနေပြီးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့အား ရေရှည်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲသွားရလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ဗီဒီယိုက အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မှာ အဘူဘေကာအယ်လ်ဘက်ဒါဒီ ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ သီရိလင်္ကာတွင် အီစတာနေ့ ဗုံးခွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ၎င်းတို့ကလုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ဤဖောက်ခွဲမှုတွင်လူ ၂၅ဝ ကျော် သေဆုံးခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ အ နောက်နိုင်ငံများအပေါ် လက်စား ချေမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ် ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ၎င်းသဆုံးသွားပြီဟု အကြိမ် ကြိမ်အဖန်ဖန်ပြောကြားခဲ့သော်လည်း အယ်လ်ဘက်ဒါဒီ၏ အသက်ရှင်နေမှုမှာ ထူးဆန်းအံ့သြစရာ ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းးမှာ အသက်ရှင်နေသေးသည့်ှုခေါင်းဆောင်အနည်းငယ်ထဲတွင် တစ်ဦးအဖြစ်ကျန်ရှိနေသည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုအား IS တို့၏ ဝါဒဖြန့်အဖွဲ့ခွဲ အယ်လ်ဖာကန် ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အယ်လ်ဘက်ဒါဒီမှာ အနီရောင်မုတ်ဆိတ် မွေးဘုတ်သိုက်ဖြင့် တွေ့ရသည်။ အနက်ရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားပြီး ကျည်ကာအင်္ကျီကိုလည်း ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ကြမ်းပြင်၌ထိုင်နေကာ ၎င်း၏ဘေးတွင် AK-47 ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကိုချထားသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လူသုံးဦးနှင့်စကားပြောနေသည်။ ထိုလူများ၏ မျက်နှာများကို အဝတ် ဖြင့်အုပ်စည်း၍ မမြင်ရပေ။
¤င်းအား အီရတ်၊ မိုဆူးမြို့ အယ်လ်နူရီဗလီ၌ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးနောက် ထပ် မတွေ့ရတော့ပေ။ ၎င်းက ဗီဒီယိုတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက မူဆလင်များအား ခါလီဖိတ်နိုင်ငံကိုထူ ထောင်ရန်၊ ၎င်းအားယုံကြည်ကြရန် ပြောကြားလိုက်သည်။ ထို့အ ပြင် ၎င်းမှာ IS တို့၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောခဲ့သည်။ ၎င်းကကျဆုံးသွားသော ညီ အစ်ကိုများအတွက် လက်စားချေသွားမည်ဖြစ်ရာ တိုက်ပွဲများဝင် သွားရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းက သီရီလင်္ကာ တိုက်ခိုက်မှုအတွက် IS တို့အတွက် ဝမ်းသာမိကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ရန်သူများ၏ ကမ္ဘာပျက်နေ့ ရောက်သည်အထိ တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟု ဘက်ဒါဒီက ပြောကြားလိုက်သည်။
NRPC နှင့် မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့ မေလအတွင်း ထပ်တွေ့ရန် မူအားဖြင့် သဘောတူ
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သည် အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ပြည်သူအပေါ် လျစ်လျူရှုထားဟု ဒုတိယ သမ္မတဟောင်း ဂျ?
မုံရွာမှ ဆောင်းသီးနှံများ ပြင်ပဈေးကွက် အပို့နည်း၍ တောင်သူများ တွက်ခြေ မကိုက်ဖြစ်နေ
ဆီးရီးယားမှ အမေရိကန်တပ်များ ရုပ်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ထိပ်တန်း သံတမန်တစ်ဦး ရာထူးမှ ??
EU က ဘရက်ဇစ် အစီအစဉ်သစ်ကို ချပြရန် ဗြိတိန်ကို ဖိအားပေး
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဓိကစီးပွားရေး အင်ဂျင်တစ်ခုအဖြစ် မန္တလေး၊ ပြင်ဦ??